Ini Handifunge Kushambadzira Ndezvekuita Mari | Martech Zone
Chitatu, September 5, 2018 Douglas Karr
Kana paine mazwi maviri andinoona mune ino indasitiri ayo anoita kuti ndicheme uye ndifambe, ndiwo mutsara kuita mari. Ini handidi kupinda mune zvematongerwo enyika zvenguva pfupi yadarika, asi kambani yakaita danho rekutanga mushambadziro wekushambadzira. Mumwe wevandaishanda navo akataura kuti kwaive kushambadzira kwakanaka nekuti zvichavaita tani yemari.
Tarisa, ivo mubatanidzwa uye vanogona kuita chero chavangade nekushambadzira kwavo. Uye kusvetukira mukukakavadzana kwakakurumbira kunogona kuve kwakanaka kune eyeballs uye kunyangwe madhora zviratidzo. Asi ini handitende kuti chinangwa chekushambadzira ndechekuita mari. Ini ndashanda kumakambani mazhinji anga ari ekutsvaga mari, uye ivo vari kutambura kana kufa - nekuti kuita mari kwaive kwakakosha metric.
Newspapers - Ini ndaishandira mapepanhau aive nehumambo pakushambadzira uye ndakaramba ndichiwedzera mitengo yavo. Nhau dzakave "kuzadza pakati pezviziviso". Kana makwikwi akauya online, vatengi uye vashambadziri vakatadza kumirira kusvetuka ngarava.
SaaS - Ini ndakashandira imwe yeSoftware yakakura seVabatsiri veSevhisi muindastiri. Mukushingairira kwavo kurova zvibodzwa mukota yega yega, ndakavatarisa vachinyaradza vatengi ndobva ndavamhanyisa kune anotevera akakosha mutengi. Vavambi pavakatanga yavo ramangwana kutanga, avo vekare vatengi havana kudaira foni. Uye pakagadziriswa mhinduro nyowani, vatengi vakakanganwa vakatama.
Kuita mari chinangwa chenguva pfupi icho chinotora iko kutarisa kune zvese zvinodiwa kuvaka bhizinesi rinobudirira. Mari ndiyo yakatsinhaniswa pakati pekambani nevatengi vayo kune kukosha kwavanounza. Mari yakakosha - kubhadharisa zvakawandisa uye mutengi wako angangonzwa kubvarurwa obva asiya. Ukasabhadharisa zvakakwana, ungatadza kukwanisa kushandira mutengi nemazvo. Mari inosiyana… asi kuvaka hukama hwakasimba ndiko kwakakosha.
Kushambadzira kunoita basa nekuyedza kutsvaga, kuziva, uye kunanga kune vangangove vatengi avo vanoda chigadzirwa chako kana sevhisi uye zvinotaridzika sevatengi vako vakanakisa. Vhiki rega rega ndinofamba kubva pamadhiri kwandisingatendi kuti ndiri mushandi wekushanda nekambani. Mamwe makambani anotogumbuka kuti ini handizovabatsire - asi ndinoziva icho icho-chenguva pfupi chinangwa che kuita mari akapotsa aparadza bhizinesi rangu munguva yakapfuura. Pandakawana mutengi chaiye, ndakamirira nemoyo murefu kushanda navo, kumisikidza tarisiro yakakodzera, uye ndakavimbiswa kuti vaida uye vaida zvigadzirwa zvangu nemasevhisi… ndipo patakavaka hukama.
Rega ndiise mienzaniso miviri kunze uko:
Ndiri kubatsira a kambani yekutsvaga mari iyo inoshanda nezvikoro izvozvi. Vakave nekukura kusinga tsanangurike pamusoro pemakore mashoma apfuura ini ndanga ndichivabatsira - asi imhaka yekuti ivo vanonyatsotarisa kune izvo zvikoro zvakanaka zviri kushanda navo. Ivo vanodzivisa kushanda muzvikoro umo chigadzirwa chavo chinogona kukonzeresa kukakavadzana pakati pevadzidzi… uye, pachinzvimbo, vanotsigira izvo zvikoro kuburikidza nehunyoro hwavo. Vangaite mari nekutengesa kwavari? Ehe… asi ivo vanoziva kuti hazvisi mune chakanakira chikoro.
Ndiri kubatsira a data centre kambani ndiani anovandudza uye akazvimirira. Ivo vanogona kuita mari nekutengesa zvidiki zvibvumirano gore rese ... ivo vanonyanya kubatsira mune pfupi pfupi. Nekudaro, ivo vanoziva kuti makuru, ebhizinesi vatengi vane zvipingamupinyi zvekuteerera ndipo pavanopenya. Nekudaro, ivo vanotengesa kumabhizinesi makuru uye vanodzivirira kushambadzira kumakambani madiki.
Ndiri kubatsira a mabasa epamba bhizinesi rinoita padenga, kutsvedza, uye mamwe mabasa ekunze. Ivo ibhizimusi remhuri anga aripo kweanenge makore makumi mashanu munharaunda. Makwikwi avo anoita zvipikirwa uye anosiya nzira yekutamba kunotyisa nekushandisa zvinorema kutengesa uye kusundidzira mutengi wese kusvika padyo kana upsell. Mutengi wangu anosarudza kufamba kubva pane izvo zvinangwa uye, pachinzvimbo, kushambadzira kushamwari, mhuri, uye vavakidzani vevatengi vavo.
Ndiri kubatsira a kuyedzwa kwemvura bhizinesi rine chinangwa chekutanga kubatsira vatengi kuyedza mhando yavo yemvura nemakiti epamba. Nekudaro, vakaona nyaya hombe kwazvo apo matunhu emakomisheni akange asina software yekutevera yekutevedzera zvizere nemitemo yemuno, yenyika, uye yemubatanidzwa. Ivo vaiziva kuti vanogona kuita zvakati wandei kuita nechinangwa chavo chekubatsira kushandura mhando yemvura iri munyika kana vakasendeka uye vakatarisa kwenguva refu pazvibvumirano zvehurumende.
Muzviitiko zvese izvi, hatisi kutarisa kwazviri kuita mari. Kuyedza kwedu kwekushambadzira ndekwekugadzirisa uye kuenzanisa zvigadzirwa nemasevhisi emabhizinesi atiri kubatsira neavo vangangove vatengi vavanogona kushandira. Ese makambani aya ane kukura kukuru, asi imhaka yekuti ivo vanoziva kana vachifanira kutendeuka kubva mukuita mari… kwete kuitevera.
Chero mushambadzi anogona kubatsira kambani kuita mari. Vashoma vashambadzi vanobatsira mabhizinesi kukura uye kukura nevatengi vanoonga zvigadzirwa zvavo nemasevhisi. Kwemakore gumi apfuura nebhizinesi rangu, ndakaona kuti mari inouya semhedzisiro yekutsvaga nekushanda nevatengi chaivo. Kushambadzira kwangu kutsvaga makambani iwayo, kwete kutsvaga nekuita mari. Ndinovimba ndiwo maonero ako futi.
Tags: kuita mariMarketingmari